Chikonzero Nei Uchifanira Kuita Pre-Basa Kuongorora Unyanzvi Paunenge Uchihaya - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
mushandi wevashandi, Human Resources
Kukura kwesangano rako kunoenderana zvakanyanya nekuwana tarenda rakakodzera. Vashandi vako ndivo vakanakisa pfuma yekambani yako. Imwe sarudzo yekukasira uye unogona kupedzisira warasikirwa nemakumi ezviuru zvemadhora.
Iwe unoda mumiriri akanakisa muchikwata chako, asi ndeipi nzira yekuwana tarenda rakakodzera?
Nzira dzechinyakare dzakaita sekutarisa maCVs hazvisi kungoparadza simba rako nenguva asi zvakare zvinokupa ruzivo rwusirirwo nezvemumiriri. Zvave kushumwa kuti anenge 25% vevanoda basa vanoita manyepo mumaCV avo. Pamusoro pezvo, pamaCV ese aunogamuchira, 78% dzine zvirevo zvinonyengera.
Maitiro emazuva ano ekuongorora uye maturusi ekuhaya senge pre-assessment bvunzo anobatsira HR kudzikisa nguva yekuhaya uye kusarudza vakanyanya kukwikwidza. Iyo inzira inoshanda uye ine chinangwa yekufananidza hunyanzvi hwemumiriri uye zvinodiwa nekambani.
Muchinyorwa chino, isu tichataura nezve mabhenefiti ekuita pre-basa hunyanzvi bvunzo mukuhaya. Tichazotaurawo nezve mabhenefiti emhando dzakasiyana dzebvunzo.
Mabhenefiti ePre-Employment Skills Test
1. Wana kubudirira kwepamusoro
Mumiriri akanaka anogara ari chinhu chakakosha kuchikwata nekambani. Kuti uwane hunyanzvi mune chero basa, kune ZVIVIRI chaiwo hunhu, Unyanzvi uye Kuda. Ose akakosha zvakaenzana.
Humwe hunyanzvi hwekuita basa hunogara huchibatsira munhu kuwana mhedzisiro iri nani pane munhu ane ruzivo rushoma. Izvi zvinowedzera kugadzirwa kwekambani yako.
Kuongororwa kwehunyanzvi hwepamberi pebasa inokubatsira mukusarudza akanakisa kuburikidza neayo akagadzirwa nesainzi rondedzero yemibvunzo. Vanofanotaura kuita kwemunyoreri pahwaro hweruzivo rwavo, kusika, uye hunyanzvi. Inogadzira nzvimbo inokwikwidza zvakanyanya mufemu yako nekuti hapana mukwikwidzi asingakodzeri kupfuura mumwe.
2. Dzidza nezvemumiriri mukati
Zvakakosha kutonga vese vanokwikwidza kuburikidza nemhando uye huwandu hwemaitiro. The patani bvunzo dzehunyanzvi hwepamberi pebasa zvinoenderana nehukuru hwechinzvimbo chauri kuhaya. Sechimwe bhenefiti, unogona kuzvigadzirisa zviri nyore kana zvisingaenderane nezvido zvako.
Semuenzaniso, basa rehutungamiriri hwepamusoro rinoda hunyanzvi hwehutungamiriri uye hunyanzvi hwekutarisira pane hwehunyanzvi. Nekudaro, iwe unoda kuti mutungamiri wako mukuru ave nehumwe hunyanzvi hwekuita. Unogona kubatanidza nyore nyore mibvunzo yehunyanzvi mubvunzo uye sarudza munhu akakodzera. Mutungamiri akanaka anounza mabhenefiti makuru kusangano rako, ingave ine tsika kana mari.
Iyo pre-yebasa hunyanzvi bvunzo inopa inotungamirwa nedata-yekuita sarudzo yevanyoreri. Zvinobva pamhinduro dzavo kune yakanyatsogadzirirwa pfungwa dziva. Hazvibviri kuti munhu anokumbira ataure nhema dzekugona kwavo.
3. Wedzera kuchengetwa kwevashandi
Kana danho rekuderera kwesangano rako rakanyanya kukwira, inyaya yekunetsa.
Sekureva kweshumo, mutengo wekutsiva mushandi wave kuda 33% yemuhoro wepagore weposvo iyoyo. Hatifanire kukuyeuchidza nezvezvinoreva kana vashandi vakawandisa vari kusiya femu yako nekukurumidza.
Chimwe chezvikonzero zvakakosha zvehuwandu hwevashandi vepamusoro ndeye chimiro chebasa icho mushandi asingadi. Nekudaro, kuwanda kwebasa kunoita kuti vanozeza vanyorere basa, vaine tarisiro yekuwana mari. Unogona kusaona kusada kwavo panguva yechinyakare yekuhaya.
Kuongororwa kwepamberi pebasa kunokubatsira nazvo.
Inobatsira kusefa vasingafariri vanokwikwidza. Sezviri pachena, avo vanowana zvibodzwa zvakanaka mukuyedzwa kwehunyanzvi hwepamberi pebasa vane kunzwisisa kuri nani kwechidzidzo. Uyezve, ruzivo rwavo runozadzisa chido chavo chemukana.
Kana vashandi vachikoshesa chimiro chebasa ravo, mukana uripo, havazoregi nekuda kwekusagutsikana nebasa. Izvi zvinowedzera kuchengetedza kwako kwevashandi.
Zvisinei, mubhadharo usiriwo unoreva mwero wakaderera wehunyanzvi. Zvinotungamirira kusashanda zvakanaka. Vashandi vasingafari vanogona kukanganisa tsika yesangano rako uye kuderedza kuburitswa kwekambani zvakanyanya.
4. Wedzera kushanda zvakanaka uye kuderedza nguva yekubhadhara nguva
Maitiro ekuhaya akajairwa anotora nguva. Zvinotora pakati 150 kune mazuva 230 kuti sangano ripinze munhu mutsva. Izvi zvinopedza huwandu hwakawanda hwesimba revashandi veHR pamwe chete nemaneja wehandi.
Nhamba yevanotsvaka basa iri kuwedzera nokukurumidza. Zvakaita kuti sarudzo yekusarudza ive yakaoma zvikuru.
Kukanganisa kwekunonoka kune njodzi.
Iwe haugone kutarisira kuita kwetimu-yakaomeswa zviwanikwa kuve yakanaka zvakanyanya. Nhengo imwe neimwe inofanirwa kutakura basa rakawedzerwa. Kana chiri chinzvimbo chepamusoro, vashandi vakaita semumhanyi akavharwa maziso, asina kutariswa. Panogona kuve nekudzikira kukuru kwezvinobuda, tsika dzechikwata, uye basa-hupenyu chiyero nekuda kweizvi.
Yakanyatso kurongeka pre-basa hunyanzvi ongororo inokurumidza zvakanyanya, ichiita iyo nzira yekuhaya isina musono uye nyore. Iyi tekinoroji inobvumira maneja ekuhaya kuti akurumidze kuongorora kunze kwekutanga, nekuita kushoma. Pakupedzisira, iwe unenge uine runyoro rwevanhu vanofarira basa racho.
Kune zvakare sarudzo dziripo kuti dziite pasi uye sarudza vashoma chete kubva muboka revanokwikwidza. Chengetedzo yekucheka-kubvisa mamakisi inogona kukubatsira zviri nyore kuderedza nguva yekubvunzurudza.
5. Wedzera kudzivirira
Kuongororwa kwepamberi pebasa kunowedzera kusarerekera, kururamisira, uye zviri pamutemo kudzivirirwa kwemaitiro ekutsvaga kwekambani yako. Uyezve, zvinokubatsira kuti uwane akawanda bhizimisi zvinangwa.
Aya bvunzo akanyorwa zvakanaka uye akarongedzerwa sekuenderana negwara remubatanidzwa. Izvi zvinowedzera simba ravo zviri pamutemo kusadziviririka. Iyo yakajairwa uye yakafanana nzira inovimbisa kuti nzira yekuhaya iri pachena uye kuti chero zviri pamutemo nyaya dzinokurumidza kugadziriswa.
6. Wedzera kukosha kwevanhu uye tsika dzesangano rako
Chinhu chakakosha chinokanganisa kubudirira kwekambani yako mukurumbira wayo. Saizvozvo, 96% yevadzidzi vepamusoro-soro pasi rose bhizimisi zvikoro zvinobvuma kuti mukurumbira une basa guru muchisarudzo chazvo chokunyorera basa.
Pre-basa bvunzo inobvumidza iwe kuhaya vanyoreri vanovandudza chimiro chekambani yako kuburikidza nemaitiro avo ebasa uye maitiro emhando. Vashandi vanogutsikana netsika dzepabasa ravo vanowanzopa mhinduro dzakanaka.
Mhando dzebvunzo dzaunofanira kufunga nezvazvo
Vashandi havasi vashandi vomuhofisi chete; ivowo vamiriri vefemu yenyu. Nekuda kweizvozvo, iwe unogona kutarisira kuti mukwikwidzi ave neakasiyana ekuzvimiririra, chinangwa, maitiro, uye tekinoroji kugona.
Pre-employment tests' patani inoita kuti unyatso ongorora munhu anenge akumbira. Heino runyoro rwemiyedzo yekufunga nezvayo.
1. Miedzo yakanangana nebasa
Aya marudzi ebvunzo anowanzo shandiswa pakuhaya mumwe munhu kuita mabasa anoda ruzivo rwebasa. Nenzira iyi, munhu akasarudzwa achave nehunhu hunodiwa kubva pazuva rekutanga rebasa. Izvi zvino chengetedza mari yaungade kuisa mari mumakosi ekudzidzira ega neimwe nzira.
2. Miedzo yehunhu
Iwe unogona kushandisa bvunzo idzi kuti uongorore hunhu hwemumiriri uye hunhu. Inopenda mufananidzo wakajeka wemunhu, zvichiratidza kana iye kana kwete iye akakodzera kutsika yekambani yako.
3. Cognitive kuongorora bvunzo
Mune zvimwe zviitiko, unogona kuwana fungidziro yesimba repfungwa remunyoreri kushanda. Mafemu mazhinji anosanganisa bvunzo iyi nevamwe kuti vatarise pfungwa dzemumiriri dzekutaura uye kusataura, kugona kugadzirisa matambudziko, uye kugona manhamba.
4. Kuongorora kweunyanzvi hwakapfava
Hunyanzvi hwakakosha hunofanirwa kuve nemushandi hunyanzvi hwakapfava. 93% yevashandirwi vanobvuma kuti hunyanzvi hwakapfava hwakakosha mukutora sarudzo. Iwo akakoshawo kwauri bhizimisi' kukura uye kubudirira.
Hunyanzvi hwekutaurirana hwakanaka, kugona kugadzirisa gakava, kushanda pamwe chete, uye kutendeka zvese zvinodiwa kuti ushande sechikwata. Inogonesa vashandi vako kubata iyo bhizimisi's vemukati nekunze vane chekuita zvakanaka.
5. Muedzo weperero
Miedzo iyi inobatsira kuona kuvimbika kwemumiriri. Kukakavadzana uye kukanganisa mamiriro ezvinhu anogona kuoneka panguva ye bhizimisi nzira. Mapinduriro anoita vavhoti kumamiriro ezvinhu ndiyo imwe yenzvimbo dzaunofanirwa kutungamira semushandirwi.
6. Emotional Intelligence bvunzo
Muedzo uyu wakakosha pakuona kungwara kwemukwikwidzi uye kugona kuvaka hukama. Chibodzwa chepamusoro munzvimbo iyi chinoratidza kugona kwavo kugadzirisa kukakavara uye kutungamira timu kuburikidza nemamiriro asingafadzi.
Ndizvo chete zvechinyorwa ichi. Ndinovimba, iwe wanzwisisa mabhenefiti ekuyedzwa kwehunyanzvi hwekuita basa uye kuti ndeapi ekushandisa panguva yekuhaya. Usakanganwe, mubhadharo usiriwo ungakudhurira bhizimisi makumi ezviuru zvemadhora.
Chinhu chakanakisa chaunokwanisa kuitira sangano rako kusarudza munhu anonyatso kwanisa. Pre-basa hunyanzvi bvunzo inopa yakarongeka uye yakarongeka maitiro ekurova chipikiri.
Musanganiswa wemhando dzakasiyana dzebvunzo unokupa iwe mufananidzo wakakwana weiyo profil yese yemumiriri. Izvi zvinokutendera kuti uite sarudzo ine ruzivo.
Zvinotora shoma shoma yenguva nemari.
Unobatsirwa Sei Kubva kuAI Talent Management Platform
Aug 9 | chakagadzirwa Intelligence, Human Resources
Maitiro Ekubatsirwa kubva kuAI Talent Management Platform
Jul 29 | Rudzi Revanhu, Human Resources
Nov 22 | mushandi wevashandi, Vashandi Management